Linux ကွန်ယက်တွင်ဖိုင်များကိုမျှဝေနည်း FromLinux | ChrisADR Linux မှ
ChrisADR | | GNU / Linux များ, ကွန်ရက်များ / ဆာဗာများ, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ
Samba မသုံးပဲ Linux network ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာလေ့လာချင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကလောဒီယိုကိုသွားတယ်။ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုမရှိသောမှတ်ချက်တစ်ခုတွင်ဂလောဒီယာသည်ထောင်နှင့်ချီသောလူ ဦး ရေ (သန်းပေါင်းများစွာသောလူ ဦး ရေသန်းပေါင်းများစွာ) မတိုင်မီကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမည့်အလုပ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ရန် GUI တစ်ခုဖန်တီးရန်တောင်းဆိုသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်ရန် GUI တစ်ခုဖန်တီးလိုကြသည် Windows ကို သူကပြောပါတယ်အဖြစ်) သည်သူ၏ပြည်တွင်းရေးကွန်ယက်ကို။ ဒီဟာကိုဖြေရှင်းနည်းမတိုင်မီအနည်းငယ်လေ့လာကြည့်ရအောင်။
1 စီးပွားရေးစနစ်နှင့် FOSS
2.1 သင် windows များ၌ folder များ share သောအခါလုံခြုံရေးတွင်းများဖန်တီးနိုင်သည်
4.2 ငါ porpow တီထွင်မဟုတ်ပါဘူး
4.5 တရားဝင်မှတ်တမ်း (စပိန်ဘာသာဖြင့် !!)
4.6 ဆာဗာနှင့် client ကို install လုပ်ပါ
ကောင်းပြီ၊ အစကတည်းကရိုးရှင်းအောင်ထားကြစို့။ ဤအရာသည် FOSS (အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဝဲလ်) စီမံကိန်းများတွင်အမြဲတစေပြောဆိုနေသည့်အရာ၊ အရည်အသွေးမြင့် အလုပ်မှာ။ အစဉ်မပြတ်ငါကြား၏, ဒါပေမယ့်ထိုကဲ့သို့သော juego ကုမ္ပဏီမှဝယ်တာကပိုကောင်းတယ် Tal ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကပိုကောင်းလို့ပါ mejor ၎င်း၏အခမဲ့ဗားရှင်းထက်, ထိုကဲ့သို့သော system ကိုဖြစ်ပါတယ် mejor အခြားအခမဲ့ထက်။ ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ကုမ္ပဏီ Tal Viva သင့်ရဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ရောင်းရန်ဖြစ်သည်ဆိုပါကကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းတစ်ခုခုရောင်းချရန်လိုအပ်သည် Buenos လူတွေကဒါကိုဝယ်ကြတာပေါ့ အခပေး အဲဒါကိုရဖို့ကျွန်တော့် developer တွေပြောတာကဒါကအစပဲ။ အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၊ တချို့ကိစ္စတွေမှာ open source ကတီထွင်တယ် စေတနာ။ ကြွင်းသောအရာတစ်ခုခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လူတွေကိုပေးဆောင်ခံရကြသည်မဟုတ်။ ဒါဆိုမင်းဘယ်လိုနေလဲ ဆော့ဖျဝဲ o စံနစ် သို့မဟုတ်ပါက၎င်းသည်အခမဲ့ဗားရှင်းထက်သာလွန်သည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပေသည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်ကြီးမားသောပြproblemနာရှိသည်။
၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပိုတူသည်၊ သင်ပိုမိုအသုံးပြုသောဆော့ဝဲလ်၊ အရာ ၀ တ္ထုများကိုကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနှင့်စဉ်းစားနိုင်စွမ်းနည်းလေလေဖြစ်သည်။ ဒီအကြောင်းကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဘယ်မှာဝင်ငွေပိုရတယ်၊ ရောင်းတာ၊ ကောင်းပြီဒီအဖြေတစ်ခု program တစ်ခုသို့မဟုတ် system ကိုဘယ်လောက်ပဲကိစ္စ, ရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါသည်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အမြတ်အမြဲပြofနာများ၏အချိန်မှာကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရမယ်သောငွေပမာဏကိုအရေးမပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်အမြတ်, အရောင်းရဆုံးအတွက်အမြတ်ထက်သာ။ ကြီးမြတ်ဖြစ်လိမ့်မည် ရိုးရိုးလေးပါ မဖြစ်နိုင်ဘူး ကြောင်းအချက်မှာအခြေခံအဆောက်အ ဦ များပြောင်းလဲပစ်ပါ။
GUI ကိုတောင်းခံရန်ဖော်ရွေမှုမရှိသောနည်းလမ်းသည်၎င်းကိုလုပ်ရန်လုံလောက်သောအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကလော်ဒီယာကိုနာကျင်ပါက ၀ မ်းနည်းပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၌လုပ်ရန် ပို၍ အရေးကြီးသောအရာများနှင့်သင်၏အချိန်ကာလမပြည့်စုံမှုကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်၏အချိန်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ပါ ၀ င်ရန်စီမံကိန်းများရှိသည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ passivity ။ ဒါပေမဲ့မင်းတို့မေးကတည်းကကောင်းပြီ၊ တစ်ခုခုအတွက် GUI မရှိသေးတဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါမယ် Windows ကို အရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်
သင် windows များ၌ folder များ share သောအခါလုံခြုံရေးတွင်းများဖန်တီးနိုင်သည်
ဒီမှာတစ်ခုထက်ပိုတဲ့သူကငါ့ကိုငါမှားတယ်၊ စသည်စသည်ဖြင့်ပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်သင်အမှန်တကယ်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ nmap ၀ င်းဒိုးကွန်ပျူတာတစ်ခုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်၊ ၎င်းသည်“ ယုံကြည်စိတ်ချရသော” ကွန်ယက်တစ်ခုတွင်ရှိပါကဖိုင်များကိုဝေမျှနိုင်မည့်အချို့သော port များတွင် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖွင့်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိရုံသာမကအောင်မြင်မှုနည်းသောတိုက်ခိုက်မှုများစွာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကိုအနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည် မျှဝေသည် ကွန်ယက်မှတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်မှု။ သို့သော်ယင်းသည်အဘယ်ကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသနည်း။ ကောင်းပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ အဘိဓမ္မာ ၀ င်းဒိုးကသင့်အားပြောရန်သင်ကြားသည် SI ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအတိအကျမသိဘဲ (မှီခိုမှုကိုသတိရပါ။ ) ဤအရာကိုဖြေရှင်းရန်အလွန်ရိုးရှင်းသောနည်းမှာပစ္စည်းကိရိယာများကိုကောင်းစွာဂရုစိုက်ရန်ဖြစ်သည် အဘိဓမ္မာ ၀ င်းဒိုးကအဲဒါမဟုတ်ဘူး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကစားသို့ကြွလာ, သင်ရန်ရှိသည်စေသည် လိုအပ်တယ် သင်တို့အဘို့အမှုအရာလုပ်ဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ၏။
လိုအပ်ချက်သည်ဖန်ဆင်းခြင်း၏မိခင်ဖြစ်ပါကမလိုအပ်သောအရာမရှိပါကဘာမှမရှိပါ။ ၎င်းကိုနားလည်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ၎င်းကိုသုံးစွဲသူများ (များသောအားဖြင့်စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူများ (သို့) ဆာဗာများအသုံးပြုသူများ) မလိုအပ်ပါက၎င်းကိုဖန်တီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အထူးများသောအားဖြင့် (များသောအားဖြင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ) တွင်ဖန်တီးသူများသည်အတွေ့အကြုံနည်းသောသူများ၏ခြေကိုချကာဆုံးဖြတ်ကြသည် ကူညီသည် GUI ဖန်တီးခြင်း (Git သည်၎င်းကိုကြိုးစားအသုံးပြုလိုသူများအတွက် GUI ရှိသည်) သို့သော်၎င်းသည်စင်ကြယ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည် စေတနာ အလုပ်၏ပမာဏကိုကတည်းကဖန်တီးသူ၏ စစ်မှန်သော အလွန်ကြီးမားသည်။ developer များမှာအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ထိုအလုပ်များကိုရာထူးသို့လျှော့ချပေးသည် အချိန်အား အချို့ကြင်နာ - နှလုံး developer ကနေ။ (သင့်ကိုဘယ်သူကမှငွေမပေးရ၊ သင်၌မိသားစု၊ အလုပ်နှင့်တာဝန်များရှိသေးသည်ကိုသတိရပါ)
၎င်းကိုဖတ်ရှုသူအားလုံးအတွက်မှတ်ချက်ပေးပါ။ အိုဘားမား (လူတစ်ယောက်၏ပုံသက်သေကောင်းဟုယူမှတ်ထားသူ) နှင့်အင်တာဗျူးတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တွေ့ခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုများစွာကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ ထိုတွင်ဒေါသထွက်နေသောလူကသူ့ကိုဝေဖန်စော်ကားရာ၊ လုံးဝဘာမျှမ။ သူသည်ဘာမျှမလုပ်ခဲ့သောကြောင့်သူသည်ထိုအချိန်ကကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သော်လည်းသူကိုယ်တိုင်ထိုအဆင့်အထိမဆင်းသင့်ကြောင်းသိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကမဟုတ်ပါဘူးနှင့်ဤဘဝ၌အဖြေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်, တစ် ဦး အငြင်းအခုံသို့ဝင်ကောင်းသောအရာတစုံတခုကိုရောက်စေမည်မဟုတ်, သူကယုံကြည်စေခြင်းငှါလူတွေကရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံး X ၏ခြိမ်းခြောက်ခြင်းနှင့်မှတ်ချက်များငါ့ကိုလှုံ့ဆော်မည်မဟုတ်ငါမှတ်ချက်ပြုရန်အဖြစ်ထားခဲ့တယ် အဆိုပါသင်ခန်းစာမစတင်မီချောင်။
ကွန်ယက်ဖိုင်စနစ် အချက်အလက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသည့် application-level protocol တစ်ခုဖြစ်သည် ဗဟို y sincronizada ကွန်ယက်တစ်ခုတွင်၎င်းသည် Windows နှင့်အခြား Linux ကဲ့သို့သောစနစ်များအတွက်အလုပ်လုပ်သည် လျှောက်လွှာအဆင့်) ။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောလဲ ဗဟိုဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည် Client / Server မော်ဒယ်လ်ဖြေရှင်းချက်နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားအပေါ်အခိုက်အတန့်အပေါ်ဤအကြောင်းကိုအပေါ်ယံထိပြီးသားဖြစ်သော်လည်းသေးငယ်သောအသေးစိတ်အချက်ကိုအလေးပေးရန်အခြားမည်သည့်အရာမျှမရှိပါ။
အခြားသူကပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါ့မှာစက်အမျိုးအစားတစ်ခု၊ ငါ့လက်ပ်တော့ပ်၊ အိမ်သုံးကွန်ပျူတာစသည်ဖြင့်အရေးကြီးသောအချက်အလက်များရှိသည်။ ပြproblemနာကအောက်ပါအချက်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ထိရောက်သော backup မော်ဒယ်တစ်မျိုးကိုလိုက်နာပါကအချက်အလက်များစွာ၏အရန်များကို ဖန်တီး၍ ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီး၊ (scripts နှင့်အခြားသူများကိုသုံးသောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်) အချက်အလက်များရောက်ရှိလာသည့်အချက်တစ်ခုတည်းကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ နှင့်ထိုအရပ်မှ data တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်စတင်။ ရှိခြင်းအပြင် ဗားရှင်းမျိုးစုံ ကွဲပြားခြားနားသောအချက်များမှာအချက်အလက်များကိုလိုက်နာရန်ခက်ခဲစေသည်သာမကအလုပ်ကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
ငါ porpow တီထွင်မဟုတ်ပါဘူး
ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်ဟုစက္ကန့်အကြာယုံကြည်သူများအတွက်၊ အမှန်တရားမှနောက်ထပ်ဘာမျှမပါသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်မှကျွန်ုပ်အားကမ်းလှမ်းသောအရာများကိုအနည်းငယ် အသုံးပြု၍ ပထမဆုံးရှာဖွေမှုတွင်တွေ့ရသောအရာကိုကြည့်ကြပါစို့ (၎င်းတို့သည် Ubuntu တွင်ရှိသည်ဟုယူမှတ်ပါလိမ့်မည်။ အဲဒါကိုသုံးသူတွေ၊ ငါ Fedora အတွက်အပြောင်းအလဲကအနည်းဆုံးဖြစ်ရမယ်။
အမြဲတမ်းကပြောသည်အတိုင်းလိုက်နာပါ အရာရှိ။ ဤအရာသည်နောက်လိုက်ရန်ပထမခြေလှမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမရေးမီ NFS နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုသိသည်ဟုမည်သူမဆိုယူဆပါကကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အရမ်းရှည် မဖတ်ပါနဲ့။ ဤအတိုကောက်ကိုသူတို့မြင်သောအခါ၎င်းတို့သည်ပြaနာကိုဖြေရှင်းရန် "ပျင်းရိသော" နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ၁၀၀% သေချာစေနိုင်သည်။ များစွာသောသူတို့ကအင်္ဂလိပ်လိုဟုတ်သည်ကိုမည်သို့သိနိုင်မည်ကိုကောင်းစွာပြောဆိုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ယခုအချိန်တွင်သူတို့သိနိုင်သည်။ these ဤအယူအဆများစွာကိုနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်သည်မြို့ပြ dicciontary ကိုများစွာအသုံးပြုသည်။
တရားဝင်မှတ်တမ်း (စပိန်ဘာသာဖြင့် !!)
ကြင်နာတတ်တဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ချို့ကငါတို့ကွန်ယက်မှာ NFS ဆာဗာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးနှင့်အတူဤရိုးရှင်းပြီးပြည့်စုံသောစာမျက်နှာကိုဘာသာပြန်ရန်အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
လိုက်နာရမည့်အဆင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့လျင်မြန်စွာမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ငါနင်ကိုထားခဲ့ပါ လင့်ခ် Google အကြောင်း X အကြောင်းပြချက်ဖြင့် Google ကိုအသုံးမပြုနိုင်သောစပ်စုသူများအတွက်နေရာတစ်နေရာသို့ရောက်ရန်။
ဆာဗာနှင့် client ကို install လုပ်ပါ
ယခုငါတို့ install လုပ်ဖို့သွားကြသည် console က မျှဝေထားသောဖိုင်များကိုအသုံးပြုရန်နေရာနှစ်ခုလုံးတွင်လိုအပ်သည်။ ဆာဗာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တပ်ဆင်သည် nfs-kernel-server နှင့် client ကိုအပေါ် nfs-common
NFS သည်တည်ရှိသော configuration file မှတဆင့်အလုပ်လုပ်သည် /etc/exports။ ဤဖိုင်သည်မည်သည့်ဖိုင်များဝေမျှရန်နှင့်မည်သို့ခေါ်ရမည်ကို NFS အားပြောပြသည်။ ၎င်းကိုပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုကောင်းစွာဥပမာများပေးထားသည်။ console ကို တည်းဖြတ်ရန်အမြဲယုံကြည်စိတ်ချရသောမှကျေးဇူးတင်ပါသည် vim (vim နှင့်မသက်ဆိုင်သောသူတို့သည်သုံးနိုင်သည် nano)
ဤရိုးရှင်းသောဥပမာအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဖိုင်တွဲကိုမျှဝေလိုကြောင်းတင်ပို့ခြင်းကိုပြောပါသည် workspace (the * ငါအကြောင်းအရာအားလုံးကိုမျှဝေချင်တယ်နှင့်နေရာမချန်ဘဲငါဒီအမှု၌ငါနှင့်ကိုက်ညီမယ့်ခွင့်ပြုချက်နှင့်ရွေးချယ်မှုများကိုရေးသည် rw အရေးအဖတ်နှင့်ဖတ်ရန်)
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်စွာပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါကဆာဗာကိုပြန်ဖွင့်ရန်လိုအပ်သည် (သို့မဟုတ်ပါက၎င်းကိုမဖွင့်ပါကစတင်ရန်)၊ ပြောင်းလဲမှုရှိတိုင်းမလိုအပ်ပါ။ သို့သော်အရာအားလုံးကိုပြန်လည်စတင်ရန်သင်မလိုပါကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ရန်အခွင့်အရေးကိုကျွန်ုပ်ယူသည်။ exportfs -ra ပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်
ပထမမျဉ်း systemctl start nfs-kernel-server ဆာဗာကိုဖွင့်သည်၊ ဒုတိယတစ်ခုမှာအရာအားလုံးအဆင်ပြေကြောင်းအတည်ပြုရန် (၎င်းသည်အစိမ်းရောင်မဟုတ်လျှင်၎င်းသည်အဆင်မပြေပါ) ကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
ယခုငါတို့အခြားပစ္စည်းကိရိယာများကိုချိတ်ဆက်တော့မည်၊ console ကိုနှင့် command ကို mount.
ဤနေရာတွင်အလေးအနက်ထားသင့်သည်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ DHCP သို့မဟုတ်လက်စွဲကိုသုံးမည်လားမသိပါ။ သို့သော်၎င်းတို့သည် IP ရှိလျှင်၎င်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ : / path / of / your / ဖိုင်တွဲ ချိတ်ဆက်မှုကိုသင်တပ်ဆင်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခု၊ ကျွန်ုပ်ကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်ခေါ်သောဖိုလ်ဒါတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည် compartido.
ဤတွင်သူတို့နှစ် ဦး စလုံးဗားရှင်း၌ရှိကြ၏ console ကို ဗားရှင်း၌ရှိသကဲ့သို့ GUI မှာ။ ထိုအခါငါသင်၌ငါအဖွဲ့အစည်း၌ငါ့အလုပ်ကိုမည်သို့မည်ပုံနည်းနည်းပြသသည်, သင်တန်းများ၏သတင်းအချက်အလက် (သူတို့တစ်တွေ OSX တပ်ဆင်ထားကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်) နှင့်ဘာသာစကားတစ်ခုချင်းစီအတွက်တ ဦး တည်းအလုပ်လုပ်ရန် Virtual စက်တွေအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်, ဒါကြောင့်ငါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းချုပ်ထားနှင့် ကျွန်ုပ်၏ Gentoo ကိုမလိုအပ်သောအစီအစဉ်များဖြင့်မဖြည့်ပါနှင့်။ ဘာကြောင့် ubuntu? ကောင်းပြီငါထက်ပိုပြီးကြိုက်တယ် Fedora ငါသည်လည်းလျင်မြန်စွာဖျက်နိုင်သည့်စမ်းသပ်စက်တွေကိုဖန်တီးရန်ပိုမြန်သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပဲ '' လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်ကိုလိုက်လျှောက်ပြီးအရာရာတိုင်းကိုအဆင်သင့်ထားခဲ့ကြပြီ အများကြီးအတွေးမပါဘဲအသုံးပြုပါ ၎င်းသည် Ubuntu ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့်အရာဖြစ်သည်။ (ထို့အပြင်ငါ Ubuntu တွင်ကျွန်ုပ်၏စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိခဲ့သည် (LFCS သည်သင့်ကိုကြီးမားသောမိသားစုသုံးစုဖြစ်သော Ubuntu (Debian), CentOS (Red Hat) နှင့် SUSE (SUSE) )), ဒါကြောင့်မှတ်မိဖို့ကောင်းတစ်လမ်းဖြစ်ခဲ့သည် apt-get y apt)
ငါဒီအချိန်တွေအများကြီးရေးပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်သင်က Claudio ကိုမြင်ရတဲ့အချိန်မှာအဆင့် ၄ ဆင့်ပဲရှိတယ်။ ရေတွက်ဖို့အတွက်ဂူဂဲလ်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်တယ်။ ဘာမှန်းလဲဆိုတာကိုသင်မသိနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းမှာ GUI မလိုအပ်တဲ့အချက် ၅ ချက်။ ငါသည်သင်တို့ကိုကမ္ဘာကြီးကို GNU / Linux plus Windows ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး google ပစ္စည်းပစ္စယ။ အကယ်၍ သင်၏ကွန်ယက်နှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများမှတစ်ဆင့်အမြဲတမ်းပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်လိုပါက /etc/fstabကောင်းပြီ, သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှာပါလိမ့်မယ်။
ကျန်တဲ့လူတိုင်းအတွက်ဒီ post ကိုရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံတယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြုပြီးခွင့်လွှတ်ပါ။ ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်ရေးခဲ့ပေမဲ့ (ဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုမှသူတို့အလုပ်နဲ့အားထုတ်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်ချင်တာမလိုချင်ဘူး၊ ကွမ်းခြံကုန်း) ... ငါတကယ်သူတို့ကသူတို့ရဲ့ connection ကိုအလုပ်အတွက်တစ် ဦး ထက်ပိုကူညီနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်အမှားများကြားမှဒီကိုလာရောက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ » Linux ကွန်ယက်တွင်ဖိုင်များကိုမျှဝေနည်း
ငါနေ့က Manjaro (Arch) အတွက်ခြေလှမ်းတွေနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ခဲ့ဘူး (ငါ Samba နဲ့ share) နဲ့ Thunar နဲ့ Nautilus share plugins
"windowizing" နဲ့ပတ်သက်ပြီး KISS က FLOSS နဲ့မသင့်တော်ဘူးလို့ငါထင်တယ်။ MS WOS တွင်ရှုပ်ထွေးသောအရာများလည်းရှိသည်၊ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုအသုံးပြုသူအတွက်အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ချေ။
command များကို5ကူးယူခြင်းနှင့် paste လုပ်ခြင်းအစား NFS ကိုထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပြီး configure လုပ်သော script သို့မဟုတ် meta-package ကိုဘာကြောင့်မပေးသနည်း။
FLOS နှင့် KISS အတွက် Thunar နှင့် / သို့မဟုတ် Nautilus (သို့မဟုတ်အခြားသူများ) တွင် NFS share အတွက် plugin ကိုပိုထည့်လျှင်ကောင်းမလား။
ထိုအခါငါကသင်၏သင်၏အိမ်စာင်ကြောင်းရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်တစ်စုံတစ် ဦး က (စံချိန်များအတွက် Samba အတွက်လည်း) ထိုသို့ပြုပါကမျှဝေဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူသည်ဆုံးမteachingဝါဒပေး GNU / Linux ကိုလူတွေကို "ပြောင်းလဲ" ရန်အခြားကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ငါပျော်ရွှင်လိမ့်မယ် NFS (သို့မဟုတ် Kba နှင့်အတူ Smart TV မှအသုံးပြုရန် Samba)
Octavio Sanchez ဟုသူကပြောသည်
အဘယ်ကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်ထိုသို့ပြုမှမကြိုးစားသလဲ တနည်းအားဖြင့် FLOSS နှင့် KISS တို့အတွက်လိုအပ်သည်ဟုယူမှတ်ပါကရှေ့သို့သွားပြီးရပ်ရွာနှင့်အတူပူးပေါင်းပါ။
ပြီးတော့ခင်ဗျားကကွန်ပျူတာသိပ္ပံကျောင်းသားတစ်ယောက်ဆိုရင် CV ကိုပြချင်တဲ့သူကပိုကောင်းတယ်။
ငါ့အတွက်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ SAMBA နဲ့လုပ်တာက Manjaro ဖိုရမ်မှာအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သူတွေအတွက်အကျဉ်းချုပ်သင်ခန်းစာကိုငါထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။ https://forum.manjaro.org/t/suggestion-samba-and-or-nfs-shares-and-plugins-easy-by-default/34169/4
RAFAEL PRESILLA ဟုသူကပြောသည်
ပုံမှန်သို့မဟုတ်ပုံမှန်ဖောက်သည်အတွက်၊ ဤအက်ပ် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပျက်ကွက်မှုမှမည်သို့ချန်လှပ်ထားသနည်း။
RAFAEL PRESILLA သို့ပြန်သွားပါ
Hello Rafael၊ စက်၏အစဖြင့်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထားခဲ့ရန်၊ ၎င်းသည် network နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်ရန် / etc / fstab ဖိုင်ကိုတည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်နည်းနည်း ပို၍ အထူးပြုဖြစ်သောကြောင့်သင်ယင်းကိုသင်စဉ်းစားသည်ဟုစီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုတွင် ခွင့်ပြုချက်နှင့်ဝင်ရောက်ခွင့်အမည်များ၊ ဝင်ရောက်ခွင့်မှတ်များ၊ မှတ်တမ်းများကဲ့သို့သောအခြားလုံခြုံရေးထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများရှိသည်။ မင်္ဂလာပါ🙂
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဤ Linux Linux တွင်စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး၊ သင်မကြာသေးမီကသင်ထုတ်ဝေခဲ့သမျှအားလုံးကိုဖတ်ခဲ့သည်။ သင်၏စာမူ၏အခြေအနေကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပါ။ ကလောဒီယိုနှင့်သင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသောတိုက်ပွဲကိုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်ယခုသင်ရေးခဲ့သည့်အချိန်ကိုကျွန်ုပ်တကယ်တန်ဖိုးထားသည်။ သင်၏ဗဟုသုတကိုမျှဝေပါ၊ ၎င်းအတွက်ပေးချေခြင်းမပြုရသေးသောကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှမှာသင့်အားလေးစားစွာဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့အလုပ်အတွက်ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ဂုဏ်ယူပါတယ်။
၎င်းသည်တိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ထိုအကြောင်းအရာနှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အခြေအနေကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းကိုနားလည်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်သည်၊ သို့မဟုတ်အခြေအနေကိုချဲ့ကားပြောဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်းအခြေအနေနှစ်ခုစလုံးတွင်ထိုသို့မဟုတ်ပါ ငါ doing လုပ်နေတာဆက်လက်ရည်ရွယ်သောအရာတစ်ခုခု
ပြီးတော့မင်းရဲ့မှတ်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တကယ်တော့ဒီလိုမှတ်ချက်တွေကြောင့်ငါရေးသားဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပြီး၊ ဒီစာမူတွေအားလုံးကိုဖတ်တဲ့သူအားလုံးနဲ့အတူသင့်ကိုအချိန်ကောင်းကောင်းဝေမျှနိုင်တယ်🙂ကြိုဆိုပါတယ်
ပို့စ်တွင်အရာအားလုံးအဆင်ပြေပါသည်။ ကျွန်ုပ်မျှဝေခြင်းမပြုပါကအိုဘားမားသည်ကောင်းမွန်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည် !!!!! နောက်ခံအစ္စရေးလ်နှင့်အတူအကြီးမြတ်ဆုံးစျေးဝယ်များထဲမှ ... ။ ESO ကိုဖတ်ပြီးနောက် folder တစ်ခုမျှဝေခြင်းသည်အသေးအဖွဲအချက်အလက်ဖြစ်လာသည်။
ငါ Linux ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုလာပြီး Linux ကိုသုံးသောသူငယ်ချင်းများကိုအကြံပြုသည်။ သို့သော်အိုဘားမားအရာသည်အလွန်အားကောင်းသည်။
ဟိုင်းအိုင်ဗန်၊ မှတ်ချက်ပေးဖို့နဲ့ဝေမျှဖို့အချိန်ယူတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်အိုဘားမားကိုကျွန်ုပ်စဉ်းစားသည့်အရာ (၎င်းသည်အလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သင်မျှဝေနိုင်သည်၊ မမျှဝေနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်ရှင်းလင်းရန်သင့်သည်) ကဲ့သို့သောအရာများအတွက်ဖြစ်သည်။ ဤ:
ဒီနေရာမှာရောတခြားနေရာတွေမှာပါတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့တခြားတင်ပို့ချက်တွေကိုဖတ်ရှုပြီးတဲ့သူတွေအတွက်၊ ငါဟာဒီဟာကိုသတိထားမိခြင်းရဲ့သဘောသဘာဝအရ“ နိုင်ငံရေး” ပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလိမ့်မယ်။ ငါကြိုးစားချင်တယ်, ဒါပေမယ့်ငါလိုအပ်တဲ့အခါငါကလုပ်ဖို့ရှိသည်။ Trump ကိုယ်တိုင်သမ္မတဖြစ်လာပြီးနောက်မကြာမီတွင်ပြောကြားခဲ့သည် ... "ဒါဟာငါထင်သည်ထက်ပိုမိုခက်ခဲသည်" ... ကျနော်တို့ပြီးသားလူမည်း, လူဖြူများနှင့်အရိပ်ရှိပါတယ်ဆွေးနွေးကြပေမယ့်သူတို့ကိုငါအသိအမှတ်ပြုရန်အမှန်တကယ်နည်းလမ်းအားလုံးအခြေအနေကိုသိရန်ကြောင်းကိုစဉ်းစား ... နှင့် ဤအချက်သည်မူဝါဒဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်များတွင်အချက်အလက်များစွာ၏သဘောသဘာဝကြောင့်အတော်လေးရှုပ်ထွေးသည်။
ငါသူ့ကိုသူ့ကိုလူကောင်းတစ် ဦး ဟုယူမှတ်သည်ဟုဆိုပါကသူသည်အများပြည်သူရုံး၌သူ၏အချိန်တစ်လျှောက်လုံးပြသခဲ့သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးများအပေါ်အခြေခံသည်။ သူသည်နည်းလမ်းအားလုံးတွင်စုံလင်သူဖြစ်သည်ဟုငါမပြောသော်လည်းသူ၌ခံထိုက်သောအရည်အချင်းများစွာရှိသည်။ အတုယူ ဒီဟာကအကြောင်းအရာကိုပိုမိုရှင်းလင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။
carlos zevallos ဟုသူကပြောသည်
Samba သည်ကျွန်ုပ်အတွက်လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ လက်ရှိတွင်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများနှင့်အုပ်စုများနှင့်စီးပွားရေးကွန်ယက်တစ်ခုတွင်အသုံးပြုသည်။ အသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းပေါ်မူတည်ပြီးဖိုဒါအချို့ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်ကောင်းမွန်နေပြီး windows နှင့် linux client များရှိသည်။
carlos zevallos အားပြန်ပြောပါ
အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်သည် windows-linux ပေါင်းစည်းမှုလောကသို့ဘယ်သောအခါမျှ ၀ င်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှန်ပင်စိတ်ဝင်စားစေပါသည်၊ သို့သော်၎င်းကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်မည်သူသိသည်ဆိုလျှင်၎င်းအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်သင်ဝံ့ပါက😉နှုတ်ခွန်းဆက်စကား🙂
Carlos, samba သည် Windows-Linux ကွန်ယက်တွင် ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော်သင် Linux နှင့်သာ LAN ကွန်ယက်တစ်ခုရှိသည့်အခါပြtheနာဖြစ်သည်။ Samba သည်အမှုအားဖြင့်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ChrisADR ဖော်ပြသည့်အဆင့်အားလုံးကိုသင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
Samux ဆာဗာကို Linux တွင်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းတွင်ကွန်ယက်တွင်အသုံးပြုရန်ပြတင်းပေါက်များမလိုအပ်ပါ။
အခြား site တွင် https://www.driverlandia.com/instalar-samba-para-compartir-carpetas-en-linux-debian/
Win7 ကတည်းကစကားဝှက်နဲ့ပြproblemsနာတွေရှိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Win7,8,10 client ကိုသာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်။ linux client တွေမဟုတ်ဘဲ linux client တွေသုံးမယ့် linux client တွေအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်။
opensuse yast မှာ nfs module ရှိတယ်၊ ဒီပြaboutနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မသိဘူး၊ နောက်တစ်ခုကငါ့ရဲ့ manjaro မှာ nfs package ကိုငါလုံးဝမတပ်ဆင်ထားဘူး၊ ငါသူတို့ကိုနည်းနည်းမှမသုံးတဲ့အခါ၊ နည်းနည်းထပ်လေ့လာလိုက်တိုင်းအရာဝတ္ထုတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ် ငါသူတို့လုံးဝမှာအစေခံမဟုတ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်းငါ့အ gnome ခဲဖွယ်စားဖွယ်ရန်, ထိုသို့တဖြည်းဖြည်း RAM ကိုစားသုံး, ငါရိုးရှင်းတဲ့ distros လျော့နည်းကြိုတင်တပ်ဆင်ထားအမှုအရာရှိသင့်ကြောင်းထင်, ငါသူတို့တစ်တွေအစပြုသူတောင်မှသူတို့ဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိသောအရာများစွာကိုသယ်ဆောင်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်သေချာ ပို့စ်ရေးသားသူကကျွန်တော့်ကို gentoo ထားရင်သူဟာ packets 200 လောက်လျော့ပြီး install လုပ်ပြီး manjaro နဲ့ငါလုပ်သမျှအားလုံးကိုလုပ်လိမ့်မယ်၊
နောက်ဆုံးဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး Richard Staliman ကအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကအခမဲ့ဖြစ်ရမယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့တာကိုငါတို့ပြောရမယ် ၎င်းအစားကျွန်ုပ်တို့အားအလွယ်တကူလွယ်ကူစေပြီးအခမဲ့ဖြစ်သောအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုလိုချင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းငယ်စဉ်းစားဆင်ခြင်ရန်နှင့်ဤစာစောင်၏ဖြစ်ရပ်တွင်ရှာဖွေရန်အသုံးပြုရမည်။ nfs အကြောင်းကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်အနည်းဆုံး opensuse တွင် graphical module တစ်ခုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် ကောင်းလားဆိုးလားဆိုတာငါမသိဘူး။
Manjaro သည်ကြီးပြီးသိပ်မမြန်ပါဘူး Gentoo ထက်မနည်း
ဒါပေမယ့် Gentoo ကိုစမ်းချင်ရင် Sabayon ကိုအကြံပေးပါ။
၎င်းသည်ကြိုတင်တပ်ဆင်ပြီးရိုးရှင်းသော Gentoo ဖြစ်သည်၊ Manjaro မှ Arch သို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသည်။
ငါ့မှာ Sabayon ကို virtual machine တစ်ခုရှိတယ်။ manjaro နဲ့ archlinux အကြား sabayon နဲ့ gentoo တို့အကြားအများကြီးကွာခြားချက်ရှိတယ်။ sabayon ဟာ entropy ကိုအဓိက package manager (equo on console နှင့် graph မှာတိကျပြတ်သားစွာ) အဖြစ်အသုံးပြုသည်။ အဲဒါကိုအများကြီးသုံးဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ Manjaro နှင့် arch တို့တွင်တူညီသော package manager ရှိသည်။ Manjaro တွင်သင်၌များစွာသော install လုပ်ထားပြီးပြီ၊ configurations နှင့် repository, gentoo အစား portage ကိုသုံးရန် guente code မှရွေးချယ်စရာများနှင့်အတူ compile လုပ်သည်။ သင်တို့ကို sabayon နှင့်ကြီးမားသောခြားနားချက်ရှိသည်။ ကြောင်း gentoo မှလာပေမယ့်ယေဘုယျရွေးချယ်စရာအတူ။
သိပ်မကြာသေးမီကလည်းကျွန်ုပ်သည်ဤပြwithနာများကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ Linux တစ်ခုတွင်စတင်သောအခါ၊ လက်တွေ့ကျပြီးခက်ခဲသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသင့်သောအမြန်ဖြေရှင်းချက်များသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းများကိုရှာဖွေခြင်းသည်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ယူသော developer များကိုလေးစားပြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သူတို့၏အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်လိုပါက၊ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်အခမဲ့ပြုလုပ်လျှင်တစ်ခုခုလုပ်လျှင်ကောင်းကောင်းမလုပ်သင့်ပါကသူတို့ကကျွန်ုပ်အားသင်ကြားပေးသည်။ ဒါပေမယ့်အစွန်းရောက်ရှိပါတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးလွန်းသောကြောင့်၎င်းင်းတို့၏လုပ်ငန်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သောကြောင့်ရှည်လျားသော terminal commands များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် developer များကအများအားဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေသောကြောင့် Linux သည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ရသည်။ အခြားအစွန်းရောက်တစ်ခုမှာ "shell" မှဆင်းသက်လာသောအသုံးပြုသူများသည်ပျင်းရိခြင်း (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေတ္တရပ်တန့်ခြင်းအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ကိုသူတို့အတွက်အရာရာတိုင်းကိုလုပ်စေချင်သည်။
မင်္ဂလာပါ Ismael၊ မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်အချက်နှစ်ချက်ကိုသာအလေးပေးဖော်ပြလိုပါသည်။ UNIX သည်“ လုပ်ခြင်းနှင့်အလွန်ကောင်းစွာလုပ်ခြင်း” ပရိုဂရမ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ရှင်းလင်းသောရှင်းလင်းသောအတွေးအခေါ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက်အများအပြားပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့ပရိုဂရမ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ငါမငြင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့အားလုံးရဲ့အောက်ခြေမှာ core GNU programs or kernel မှာ logic မရှိတာကိုငါမတွေ့ခဲ့ဘူး။ ထိုကဲ့သို့သောမကောင်းသောအကြံဥာဏ်ကိုရံဖန်ရံခါညံ့ဖျင်းစွာစဉ်းစားထားခြင်းမရှိသောအစီအစဉ်မှထုတ်လုပ်ခြင်းသည်ကံဆိုးပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သူငယ်ချင်း ChrisADR၊ မင်းအကြောင်းမင်းသိတာပေါ့၊ ငါမင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှတ်ချက်ထဲမှာ terminal (သို့) gui preference output မှာအနည်းငယ်ပြင်းထန်လွန်းလျှင်တောင်းပန်ပါတယ်။ သို့သော်ဤပို့စ်တွင်သင် Linux ကိုကျွန်ုပ်ပြောဆိုနေသည်များကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ Linux LAN ကွန်ယက်တွင်ဖိုလ်ဒါများကိုမျှဝေရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်ဤအလွန်ကောင်းသောပို့စ်တွင်ကောင်းစွာဖော်ပြသောကြောင့်သုံးစွဲသူတစ် ဦး အနေဖြင့်အလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။ Linux lan ကွန်ယက်တစ်ခုပေါ်ရှိဖိုလ်ဒါများကိုမျှဝေရန် terminal တစ်ခုတွင်ရှိသည်။ ငါထပ်တလဲလဲ, ဒီ post ကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကံမကောင်း, ငါ့အဘို့, surelyကန်အမှန်အများအပြားအသုံးဝင်လိမ့်မည် ငါ linux ကနေအများကြီးပိုမျှော်လင့်ထား။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် LAN ကွန်ယက်များအတွက် Guindous ကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သေချာတာပေါ့၊ ငါ့ရဲ့မှတ်စုစာအုပ်မှာကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ MX Linux နဲ့ဆက်ပြီးပါ။
သင်လိုချင်တာကိုရရှိရန်ကျွန်ုပ်မကြာခဏအသုံးပြုသောအလွန်ရိုးရှင်းသောအဖြေမှာအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည် https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Shell_Filesystem y https://es.wikipedia.org/wiki/Files_transferred_over_shell_protocol.
မင်္ဂလာပါကလောဒီယို။ ။ မင်းကိုဝေငှဖို့အချိန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မင်းရဲ့တောင်းပန်မှုကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တစ်နေရာရာရိုင်းစိုင်းတယ်ဆိုရင်လည်းငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။ ကောင်းပြီ၊ မင်းငါ့ကိုပြောနေတာဟာရှက်စရာဖြစ်ပေမဲ့မင်းကိုငါကမ်းလှမ်းထားတယ်။ ၎င်းသည်အသုံး ၀ င်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်နိုင်ပြီးတစ်ခုထက်ပိုသောစိတ်ဝင်စားပုံရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စီမံကိန်းကိုတိုးတက်မှုအဆိုပြုလွှာအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ 🙂ကျွန်ုပ်တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်ပရိုဂရမ်တစ်ခုလုံးပြုလုပ်ရန်အချိန်သို့မဟုတ်စက်ရုံမရှိခြင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်နိုင်သည်။ Nautilus (GNOME) သို့မဟုတ် Dolphin (Plasma) သည်အခြား developer အချို့အချိန်ကို ၀ ယ်နိုင်သည့်တိုင်အောင်၎င်းကိုသူတို့လုပ်ရန်စာရင်းတွင်ထည့်နိုင်သည်။
သင်စိတ်ကူးကိုသဘောကျပါကတိုးတက်မှုအဆိုပြုချက်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်မည်ကဲ့သို့ထုတ်ဝေမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ချက်ချင်းချက်ပြုတ်နေသည်ကိုမည်သူကသိပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ငါ Syncthing ကို install လုပ်ပြီးပြproblemsနာမရှိဘူး။ ငါကဒီမှာအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကကူညီသည်။
မင်္ဂလာပါ။ ChrisADR သည်ဤဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်လာသည်နှင့်နောက်လာမည့်စာအုပ်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါက၊ ၎င်းမှသင်ခန်းစာယူပြီးအခြားအစီအစဉ်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ post ၏အချက်တစ်ချက်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
အခြေအနေတွင်ငါ ATM စက်များမှအချို့သောဖိုင်များကိုကူးယူပြီးဆာဗာ (GNU / LINUX) သို့ကူးပြောင်းရမည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရန်ကူးစနစ်တစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်နေသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် ATM စက်များ (ATMs) နှင့်အလုပ်လုပ်နေသည့်အခြေအနေရှိသည်၊ မည်သည့်ဆိပ်ကမ်းကိုမှမဖွင့်နိုင်ခြင်း၊ ငါ့မှာ windows network service service လည်းမရှိဘူး၊ ငါလည်း ftp သုံးလို့မရဘူး။ ကျွန်ုပ်အတွက်ထိုကိရိယာများမရှိပါ၊ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုသတ်သတ်မှတ်မှတ် ဖြစ်၍ ၎င်းအတွက်ကိရိယာမရှိပါ။
ဒါပေမယ့် SSH နဲ့ SCP တို့လိုတစ်ခုခုရှိတာသူတို့အတူတကွကောင်းမွန်တဲ့ tools တွေရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့် Windows ကို SSH ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်မလဲ။ ငါ့ကို protocol ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့် program အတိအကျမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ပိုမို၍ ဘက်စုံသုံးရန်လိုအပ်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည် CLI interface နှင့်တစ်ခုခုလိုအပ်သည်။ သိသာစွာကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမျှမသိပါ၊ သုတေသနပြု၍ သင်သည်ကွဲပြားသော network protocols များကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုသည့် python library ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုယခုသုတေသနပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Samba သို့မဟုတ် SFN ကိုအသုံးမပြုသော်လည်းကောင်းမွန်သောလုံခြုံသော protocol ဖြင့်ဖိုင်များကိုကူးပြောင်းနိုင်သည်။
ငါဤအရာကိုရယူလိုပါက python ကိုသိခြင်းနှင့်တစ်စုံတစ်ရာရှိခြင်း (ssh) ရှိခြင်းကိုသိခြင်းနှင့်အတူပေးထားသောတာဝန်ကိုပြီးမြောက်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ports ကိုဖွင့်ရန်သို့မဟုတ် windows လက္ခဏာများကိုသက်ဝင်စေရန်လိုအပ်သည်။ ငါ့ကိုခွင့်ပြုမ tool ရှိပါတယ်။
၎င်းသည်ဘာသာရပ်သို့မ ၀ င်ပါ၊ သို့သော် CLI ကို GUI ထက်ဘာကြောင့်ပိုနှစ်သက်ရတာလဲဟုကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းလျှင်၊ CLI သည်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ရုံသာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ဂရပ်အပေါ်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောစွမ်းအားကိုပေးသည်။ CLI tool ကိုအခြားပရိုဂရမ်များ (wrapper) တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဂရပ်သည်အသုံးပြုသူအတွက်သာဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ🙂ကောင်းပါပြီ၊ ခင်ဗျားပြောတာတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပြီးတော့မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း CLIs သည်နောက်ကွယ်မှမှော်အတတ်များနှင့်တူသည်၊ အမြဲအသိအမှတ်ပြုခံရသည်မဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့မရှိလျှင်မြင်နိုင်သည့်အရာများ (GUI) မှာလုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ။
Arturo ဂျေ Ducoing O. ဟုသူကပြောသည်
စိတ်ဓာတ်မကျပါနှင့်၊ ၀ င်းဒိုးအသုံးပြုသူသည်အလွန်ထူးခြားသည်ကိုသတိရပါ။ ဤစနစ်သည် ၄ ​​င်းတို့၏တည်ရှိမှုကိုဖျက်ဆီးသည်အထိတစ်ခါတစ်ရံတွင် ၄ င်း၏အသုံးဝင်မှုကိုသံသယဝင်လာပြီး၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုရန်ပင်ပြန်လာသည်။
Windows အသုံးပြုသူများသည် legion ဖြစ်ပြီးအချို့သည်အခြားသူများထက် ပို၍ နတ်ဆိုးစွဲသည်။ ၎င်းတို့သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုဖတ်ရှုရန်အသုံးမပြုသောကြောင့်သူတို့ကို GNU / Linux ပတ် ၀ န်းကျင်သို့ရောက်သောအခါသူတို့သည်အလွန်ဆင်းရဲခြင်းခံရသည်။
Arturo J. Ducoing O. အားစာပြန်ခြင်း
eurekaaaa၊ ကျွန်ုပ်နောက်ဆုံးလိုအပ်သောအရာကို "open source သည်ကောင်းသောစိတ်ဖြင့်တီထွင်သည်။ " ၎င်းသည်ရှင်းပါသည်။ ၎င်းသည်အလွန်အကျိုးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူတူလိုအပ်ချက် ရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးပြီး (သို့မဟုတ်မျှဝေသည်) ကျွန်ုပ်သည်အလွန်အမင်းတောင်းဆိုခဲ့သည့်ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုလုံးကိုမဖတ်နိုင်သောသူတစ်ယောက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ထိုအဟုတ်, ကောင်းသောစေတနာစိတ်, သူက "မျှဝေ" နှင့်ငါအလွန်ကျေးဇူးတင်တယ်။ သို့သော်ဤ post သို့နိဒါန်းက "သင်ကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းချက်အတွက်သင်ငွေသွင်းရမည်" ဆိုသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည်အားသွင်းမည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်အချိန်သည်အလွန်တန်ဖိုးရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်အဖြေကိုရှာထားသော link ကိုမတင်ပါ။ ရှာဖွေရန်အချိန်ယူခဲ့သည်။ ငါက yuotube တွင်တွေ့နိုင်ပါသည်စိတ်ဝင်စားသူများနှင့်အတူတူပင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိသည်သောသူတို့အားသာမှတ်ချက်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။ 🙂
Rams Castaway ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
အဖြေတစ်ခုကို "တောင်းခံရန်" နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကသင့်အားဘာမှအားသွင်းစရာမလိုဘဲသင့်အားအသေးစိတ်ရှင်းပြရန်အချိန်မည်မျှလွယ်ကူမည်နည်း။ ChrisADR (ကျွန်ုပ်မသိသောသူ) သည်၎င်းအတွက်တစ်ပြားမှမကောက်သော်လည်းအခြားသူသည်အကျိုးအမြတ်မယူသော၊ မျှဝေထားသောရင်းမြစ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့သည်ဟုသင်တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်စွာပြောဆိုနေသည် (သင်မလိုအပ်သည်) မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့သဘောထားကလိုချင်တဲ့အရာများစွာကျန်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ထို "ကောင်းသောဖြေရှင်းနည်းများ (ထို) အတွက်အဖိုးအခပေးရန်လိုအပ်သည်") ကိုသင်နှင့်၎င်းတို့ကိုပြုလုပ်သူကမပြုလုပ်ရသေးကြောင်းသတိရပါ။ သို့မှသာသင်သည်သင့်အားကပ်ပါးကောင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည် (predation အမျိုးအစား။ ပါဝင်သူတစ် ဦး (ကပ်ပါးကောင်သို့မဟုတ် host) သည်အခြားတစ်ခု (host သို့မဟုတ် host) ပေါ်တွင်မူတည်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးအချို့ရရှိလိမ့်မည်။ ) မှတ်ချက်။ ဆိုလိုတာကခင်ဗျားရဲ့ရှာဖွေရေးမှာပြtheနာမရှိဘူး၊ မင်းရဲ့အချိန်ကအဖိုးတန်တယ်။
Rams Castaway မှစာပြန်ပါ
ကောင်းပြီ၊ သိသာထင်ရှားသည်မှာသင်၏ခေါင်း၌မကောင်းသောအရာများရှိရမယ်။ လူတွေကဒီနေရာမှာလိုလိုလားလားထည့်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကနေနေ့တိုင်းအကျိုးကျေးဇူးရနေပြီး၊ "အဆိုအရ" သင်ထိုက်တန်သောအရာတစ်ခုခုကိုသင်မျှဝေရန်ငြင်းဆန်သည်၊ ပယ်ဖျက်ရန်သင်၏ IP ကိုကန့်သတ်ထားပြီးသင်သည် FromLinux ကိုပြန်လည်မဝင်နိုင်စေရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအသိုင်းအဝိုင်း၌တစ်ခုခုရှိပါကကပ်ပါးကောင်များအတွက်မဟုတ်ဘဲလူများအတွက်ဖြစ်သည်။
Ernesto Iglesias ဟုသူကပြောသည်
ပထမ ဦး စွာတင်ပို့ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အလွန်အသုံးဝင်သော်လည်းသူတို့ပန်းချီဆွဲလိုသည်မှာမလွယ်ကူသော်လည်းရှာဖွေမှုများစွာရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းပြီးပြwantနာနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်သောနိဒါန်းနှင့်မှတ်ချက်များအားလုံးသည်အလွန်ဆိုးရွားပြီး၊ စာရေးသူမှပိုမိုကောင်းမွန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုမပြုလုပ်လိုပါကအခြားသူတစ် ဦး ဦး ကဖြေဆိုမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းအားကောင်းသောရှမာရိလူဟုခေါ်ဆိုရန်မလိုပါ။ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် သူတို့အားသွင်းသည်ဖြစ်စေ၊ မဆက်သည်ဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်အရာရာတိုင်းကိုလုပ်သည်ဖြစ်စေ၊ ၀ တ္ထုများနှင့်ဂူဂဲလ်တစ် ဦး ဦး အနေဖြင့်အရာရာတိုင်းကိုလုပ်ရန်အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပါ။ ကုဒ်နံပါတ်များကပ်ခြင်းဆိုသည်မှာသင်၏ခေါင်းကိုအသုံးပြုခြင်း၊ အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
ငါလိုချင်တာက Windows ကနေငါအမွေရခဲ့တဲ့ NTFS hard drive တစ်ခုမှာ folder တစ်ခုကို mount လုပ်ဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်၏အဓိကစက်မှရယူပြီးရေးသားနိုင်သော်လည်း NFS ဆာဗာကိုအဓိကစက်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ သုံးစွဲသူကို - လက်ပ်တော့တွင်တပ်ဆင်။ လက်ပ်တော့ပေါ်တွင်မတပ်ဆင်နိုင်ပါ။ ငါကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကိစ္စမရှိဘူး
ကကတိထားရာကိုမကျင့်ကြောင်းကင်လုပ်ခိုင်း post ။